नेपालीले बन्दुक र खुकुरी लिएर भिड्न मात्र होइन, प्रविधिको युद्ध पनि जित्न सक्छन् - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
रेल हाम्रो आवश्यकता हो । (रेल ग्ल्यामर होइन, आवश्यकता हो) अहिले नेपालमा रेल भन्ने शब्द फेसन भएको छ । कुरा बढी गर्नुभन्दा पनि काममा लाग्नु राम्रो हुन्छ ।
नेपालीहरू कति साहसी हुन्छन् भन्ने कुरा दीपक साहले (ट फेस्ट र्‍याली विजेता दीपक) पुन : पुष्टि गरिदिएका छन् । नेपालीहरू बन्दुक र खुकुरी लिएर भिड्न मात्र होइन, प्रविधिको युद्ध पनि जित्छन् भन्ने देखाएका छन् उनले । दीपकले नेपालको नाम पुन: विश्वसामु चिनाएका छन्– बधाई छ ।
सम्पत्तिका लागि मानिस कुन हदसम्म गिर्दो रहेछ । (तीन पुस्ताको एउटै चिहान) सम्पत्तिका लागि मानिस अन्धो हुन्छ भन्थे हो रहेछ ।
विद्यार्थीहरूलाई विदेश जान (त्यसपछि कुनै पनि नेपाली विदेशमा बस्दैनन्) प्रोत्साहित गर्ने भन्दा पनि त्यहाँ गएका विद्यार्थीहरूलाई पुन: नेपाल फर्काउने वातावरणको आवश्यकता छ ।
विश्व प्रसिद्ध संस्था गार्टनले उद्योग क्षेत्रमा गरेको भविष्यवाणी गम्भीर खालका छन् । (प्रविधिमा देखिनेछन् यस्ता समस्या) यी समस्यालाई ट्याकल गर्न उद्योगीहरूले योजना बनाउनु जरुरी छ । ०२१ सम्ममा सोसल मिडियामा हेर्ने विभिन्न काण्ड तथा सेक्युरिटी उल्लंघनका असरमा कमी आउने कुराले सकारात्मक आशा जगाएको छ ।
नेपालीहरू पनि के कम ? (८५ लाखसम्मका बाइक नेपालमा) यति महँगा बाइकमा हुइँकिने क्षमता राख्छन् । यति महँगा बाइक कुद्ने सडकको अवस्था देख्दा भने लाज लाग्छ ।
मलाई मनपर्ने गायक पुष्पन प्रधानका बारेमा धेरै पछि पढ्न पाएँ । (साइन्स ग्रुपबाट अडिसनमा छानिए) यथार्थवादी गीत गाउने थोरै गायकमा पर्छन् पुष्पन ।
कफी धेरै पिउनु उपयुक्त हुँदैन । (रेखा थापाको कफी मोह) । अभिनेतृ रेखा थापा कफीकी पारखी रै’छिन् । दिनमा एक कप पिउनु ठीकै भए पनि धेरै पिउनु हुँदैन । मेरो जमानाकी एक स्टार अभिनेतृ भएका कारण उनकै स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै यो सुझाव दिएकी हँु अन्यथा नलिनु होला ।
भनाइ नै छ गुन्द्रुकमा जात छोड्नु तर अभिनेता आर्यन (लुडोमा आर्यनले हारे १ सय) ले त पहेंलो सागमै इज्जत फालेछन् । १ सय रुपैयाँ हारेको पनि मिडियाबाजी गर्ने कस्ता नायक होलान् ?
सलमान धनीको सूचीमा (सलमान एक फेरि नम्बर वान) मात्र नभएर फ्यानको पनि नम्बर एक कलाकार हुन् । उनका हरेक चलचित्रले करोड क्लब कटाउनुबाट नै उनको स्टारडमका सम्बन्धमा जानकारी हुन्छ ।
शृंखलाले मिस वल्र्ड जित्न नसके पनि टप १२ सम्म पुगेर नेपालीहरूको मन जितेकी छिन् । (मिस वल्र्डपछि शृंखलाको मनोदशा) श्रृंखलाले नेपालीहरू पनि अव विश्व समुदायसँग टक्कर लिन सक्षम छन् भन्ने आशा र भरोसा जगाएकी छिन् । उनले त्यहाँ सिकेका कुरा नेपाली समाजमा सिकाउनुपर्छ, त्यो उनको अझ ठूलो सफलता हुनेछ ।
नेपालको संस्कृति र सौन्दर्यका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई जानकारी गराउन पोलिन भर्जाजस्ता अधिकारीहरूलाई सरकारले प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । (विकेन्ड मनाउन काठमाडौंबाहिर जाने मन छ) उनीजस्ता उच्च ओहोदामा बसेका मानिसहरूलाई नेपाल र नेपालीका बारेमा राम्रोसँग बुझाउन सके उनीहरूले आफ्नो देशमा नेपालको प्रचार गर्नेछन् जसले नेपाल भिजिट वर्ष–२०२० लाई सफल बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।
कलाकार भएपछि ठूला र बजारमा बिक्ने कुरा गर्नैपर्ने । (सम्भावना जीवितै छ) कोमल वली पनि के कम अब त उनी कलाकार सँगै नेता पनि भएकी छिन् । कलाकारभन्दा एक कदममाथिका कुरा गर्दै आफूलाई बिकाउनैपर्‍यो । यदि विवाह नै गर्ने भए खुरुक्क गरे भैगयो नि, किन प्रचार गरी हिँड्नुपर्‍यो र ?
अहिले च्याउसरी खुलेका अनलाइन र युटुव च्यानलले धेरैलाई हैरान बनाएको छ । मेनुका पनि त्यसको सिकार भएको कुरा सुनेर दु:ख लाग्यो । (अनलाइनहरूको फेक न्युजको सिकार भए) उनी जस्ता प्रतिभाशाली कलाकारले अझै अघि बढ्नुपर्छ । मेनुकाले जुन स्थान प्राप्त गरिन् त्यसलाई आगामी दिनमा सदुपयोग गर्दै जाऊन्–शुभकामना ।
सुवास पनि निर्देशक
कुनै युवतीले पनि बिहेको प्रस्ताव राखेनन् : अर्पण थापा
सोसल मिडिया समयको बर्बादी मात्र